Puntland iyo Culumada Maamulkaasi Oo Kawada Hadlay Sidii Looga Hortagi Lahaa Xanuunka Coronavirus – Goobjoog News
Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka puntland Cawil Sheekh Xaamud ayaa waxa uu kullan magaalada Garowe kula qaatay culuma awdiinka Puntland iyaga oo kawada hadlay sidii looga hortagi lahaa xanuunka Coronavirus.
Cawil Sheekh Xaamud ayaa sheegay in culumada deegaanada Puntland ay isla garteen in ay sii furnaadaan masaajidda balse la xiro gabi ahaanba goobaha looga weysqaato masaajidda islamarkaana qof waliba uu gurigiisa ka soo weysqaato si looga hortaggo in uu faafo cudurkan Covid19.
Sidoo kale wasiirka ayaa tibaaxay in la isla gartay in dhamaan la joojiyo daruusta laga akhrinayay guud ahaan masaajidda maamulka Puntland, sababtana waxa ay ku sheegeen in ay tahay taxadar islamarkaana masaajidda caalamka ay intooda badan xiranyihiin.
Dhanka kale culumada Puntland ayaa waxa ay ka dhawaajiyeen in ay ka dhabeen doonaan qodabadii ay isla qaateen iyaga iyo maamulkooda, waxa ayna shacabka ugu baaqeen in ay sameeyaan taxadar islamarkaana ay Alle tala saartaan.
Deegaanada Puntland ayaa horey waxaa looga dhawaaqay in la fasaxay goobaha waxbarashada iyo sidoo kale qeybo ka mid ah xafiisyada maamulkaasi si looga baaqsado faafida xanuunka Coronavirus oo kiiskii ugu horeeyay laga helay magaalada Muqdisho.
Golaha Shacabka Iyo 10 Qodob Oo Wax Laga Soo Badalay Xeer-hoosaadkooda
Qaar Ka Mid Ah Qaxootiga Suuriya Oo Dib Loogu Celiyey Dalkooda
Ciidamada Puntland Oo Gacanta Ku Dhigay Rag Looga Shakisan Yahay Al-shabaabnimo
Ecgphf yhotat cialis cialis discount
Zybphl wlynut Viagra order canadian pharmacy cialis
Fhszmi ugzbwo viagra generic best online pharmacy
MS Office Suite is a comprehensive tool for office and home....
Our doctor thought that Dad was conceivably even control sup...
generic viagra approved by fda https://mymvrc.org/...
viagra online prescription https://www.jueriy.com/...